Tag: youtube mufananidzo | Martech Zone
Tag: youtube mufananidzo
Svondo, Nyamavhuvhu 16, 2015 Chipiri, Kurume 15, 2016 Douglas Karr
Zvinoita here kuti ugadzire thumbnail yevhidhiyo yeYouTube? Ehe! Izvo zvinobatsira kuratidza zvigunwe zvine zvinongedzo mumabhara epadivi, kana kutsiva iyo Youtube embed kodhi nevhidhiyo mukati meRSS feed kana email. Ichi chatova chimiro chemamwe mapuratifomu eemail, senge WordPress Newsletter Plugin. Kuedza kunyora yako wega Youtube thumbnail jenareta inogona kunge iri basa chairo. Nhau dzakanaka ndedzekuti haufanire kugadzira thumbnail,
Mazuva gumi Kuruboshwe: Mukana Wako Wokukunda $ 10 1,000 i50%!
China, November 15, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kwete chaizvo kurohwa kwandanga ndafungidzira, asi ndinoshamisika nekunonoka kuri kuita $ 1,000 yemari yekupa. Isu parizvino tine 1 blog, Blog Paradise, uyo akaendesa kupinda kwavo mune yekupa! Blog Paradhiso yakanyora imwechete yakaringana posvo iyo inogona kuvawanisa iwo madhora chiuru! Mazuva Gumi Kuruboshwe! Izvi zvinoreva kuti iwe paunotumira yako posvo, iwe wakasundira izvo zvinopesana ku1,000%! Nyora tsamba kune mumwe nemumwe wevatsigiri